UAlexei Antonov kunye neqhekeza lakhe elikhethekileyo 'La rosa' | Izidalwa ezikwi-Intanethi
'I-Rose' kwioyile nguAlexie Antonov
Sibuyela kwimizobo yeoyile kunye noAlexei Antonov kunye neqhekeza lakhe elikhethekileyo "iRose" Umsebenzi wokuncoma ikwenza njani ukukhanya kwelo rose apho intyatyambo inguye kuphela owamkela umbala ukuba ujikelezwe yingqele yeethoni, ameva amagqabi ayo kunye neso sitya siyixhasayo.
Kusendleleni ukukhanya kusebenza njani Apho ungancoma umsebenzi ka-Antonov wokusisa emsebenzini wobugcisa obonisa ukuzinikela okukhulu kwezothando kwaye oko kunokukhumbuza lo mahluko woBuhle kunye neRhamncwa.
Umculi oneminyaka engama-59 ubudala waseRussia oye ukusebenzela iimagazini ezahlukeneyo njengomzobi kunye nomzobi kwaye unokufumana imisebenzi ekumgangatho ophezulu ngakumbi efuna ubunyani bokwenyani kwezinye zazo, ukudlula phambi kwabanye abafuna ulingelo. Kusuka kwi-bio yakhe ukuba uphawule ukuba uhlala epeyinta ngezandla zakhe zonke njengoko esenza izinto ngendlela eyahlukileyo yokufuna indlela eyahlukileyo yobugcisa kunye nesitayile sakhe.
Wayesebenzela amaqela omculo werock kunye nepop kwaye uhlala ekhona ukufunda iiklasikhi ezinje ngeRubens, UVan Dyke kunye noSnyders. Ngestayile esijolise kwii-classical kwaye esiqaphelekayo kwimisebenzi yakhe nganye, ngoku uhlala e-United States emvumele ukuba abelane ngenxalenye yomsebenzi wakhe.
Ipeyinti yeoyile ebalulekileyo ubu ethe-ethe kunye nobuntununtunu ifunyenwe iphelele kwaye kwezo nkcukacha zinokufumaneka, kunye nokukhanya okuvela phezulu okuphumelele ngokugqwesileyo.
Unayo iwebhusayithi yakho for yazi yonke imisebenzi yakhe uze umlandele facebook wakho ukuthobela ingqalelo kwindaleko yamaqhekeza akho alandelayo.
Kwezinye iindawo kodwa kwioyile, imuvi malunga noVan Gogh.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'I-Rose' kwioyile nguAlexie Antonov
Ipakethe yasimahla yokudala yokudala
Imvelaphi entle kaKazuo Oga, omnye wamagcisa achonga iStudio Ghibli